काठमाडौं । अभिनेत्री करिश्मा मानन्धर कक्षा ९ उत्तिर्ण गरेर १० कक्षामा पुगेकी छन् । ८ कक्षादेखि मैतिदेवीमा रहेको त्रिवेणी पब्लिक स्कूलमा पढिरहेकी करिश्मा निरन्तर पास भएकी छन् । प्रौढ उमेरमा स्कूल जान थालेकी करिश्माले ९ कक्षामा कति प्रतिशत ल्याइन् त ?
दी होलो होटल
एजेन्सी । बेलायतको प्रमुख शहर लण्डनमा एउटा यस्तो होटल खोलिएको छ जहाँ आफ्नै मृत्युको अनुभव गर्न सकिन्छ ।
पोखरा । आन्तरिक राजश्व कार्यालय पोखराले चालु आवको चैत मसान्तसम्म रु छ अर्ब २९ करोड राजश्व संकलन गरेको छ ।
कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक फेरि स्थगित, बैठक बस्ने निश्चित भएपछि देउवा काठमाडौं बाहिर
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक फेरि स्थगित भएको छ । बैठक आइतबार बिहान ११ बजे बस्ने गरी स्थगित भएको हो। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा काठमाडौं बाहिर भएकोले बस्न बैठक स्थगित गर्न परेको कांग्रेसले जनाएको छ। बैठक पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बस्ने भनिएको थियो ।
केन्द्रीय सदस्य खुमबहादुर खड्काको निधन भएपछि चैत १६ गतेदेखि बैठक स्थगित भएको थियो।
बुटवल । प्रहरी मुठभेडमा मारिएका कुख्यात अपराधी मनोज पुनको मुख्य सहयोगीका रुपमा भूमिका निभाएको आरोपमा पक्राउ परेका युवा संघ नेपालका केन्द्रीय सदस्य सुजु मल्ललाई प्रहरीले आज सार्वजनिक गरेको छ ।
डिआईजीको लागि २५ जना एसएसपीहरु प्रतिस्पर्धामा (नामसहित)
काठमाडौं । विशिष्ठ श्रेणीको यति धेरै पदहरु झण्डै ७३ हजार सदस्य रहेको संगठनमा किन आवश्यक पर्यो भन्ने बहस र पैरवी अहिले भइरहँदा तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तीन जना डिआईजीको पद थपे । त्यो बेला नेपाल प्रहरीमा ९ डिआईजीको पद रिक्त थियो ।
किन नेपाल आएका थिए यी १० विश्वप्रख्यात सेलीब्रेटीहरु ?
पछिल्लो समय अन्तराष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त सेलीब्रेटीहरुले नेपाललाई पनि आफ्नो गन्तब्य स्थल बनाउने गरेका छन् । कोही नेपाल घुम्ने उदेश्यले, कोही व्यवसायीक उदेश्यले, कोही सामाजिक कार्यको लागि त कोही धार्मीक कार्यको लागि नेपाल आउने गरेका छन् ।
Page2of 3762